नर्स: महामारीमा पनि अग्रपंक्तिमा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
देशमा शैक्षिक योग्यता र अनुभव अनुसारको काम गर्ने व्यवस्था नहुनु, सेवाभित्रको शिक्षा, स्थायित्व नहुनु, कम पारिश्रमिक, उचित कार्य मूल्यांकनको अभाव, अत्यधिक कामको बोझ, कार्यस्थलमा हिंसाको खतरा जस्ता कारणहरुले आज देशबाट धेरै नर्सहरु पलायन भइरहेका छन् ।
माघ १५, २०७८ ज्वाला ढकाल
आज नर्सिङ दिवस । नर्सिङलाई कला र विज्ञान दुवैको रुपमा वर्णन गर्न सकिन्छ । यसको हृदयमा मानव प्रतिष्ठाको लागि आधारभूत सम्मान र बिरामीहरूको आवश्यकताहरु थाहा पाउने एउटा अदभूत क्षमता रहन्छ र जुन कडा परिश्रम र कठोर सिकाइको परिणाम पनि हो ।
नर्सिङ पेसामा विशेषज्ञता र सीपहरुको फराकिलो दायरा भएको कारणले गर्दा प्रत्येक नर्ससँग विशेष किसिमको जोश जाँगर र विशेषज्ञता हुन्छ । आजको अवस्थामा नर्सहरुको भूमिका प्रत्यक्ष बिरामीहरुको हेरचाहमा मात्र सिमित नरही केस व्यवस्थापनदेखि नर्सिङ प्राटिक्सका मापदण्डहरु स्थापना गरी गुणस्तर मापनका प्रक्रियाहरु विकास गर्ने र कृटिकल नर्सिङ कियर प्रणालीहरु निर्देशित गर्ने नर्सिङको आफ्नै एउटा दायरा छ ।
नर्सिङ पेसा कुनै एउटा वर्गका लागि मात्र नभई सबै उमेर समूहका लागि स्वास्थ्य संरक्षण प्रवर्द्धन र सुधार गर्नको लागि स्थापना गरिएको हो । नर्सिङ व्यक्ति, परिवार र समुदायको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र सुधार र प्रोत्साहनका लागि पनि जिम्मेवार छ । नर्सिङ पेसा बिरामी, घाइते, अशक्त र जीवन–मृत्युसँग लड्दै गरेकाहरुको हेरचाहमा विशेष भूमिका राख्दछ । नर्सहरुले सक्रिय रुपमा हेरचाह, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नीति, विचार विमर्श र बिरामीको पक्षमा आवाज उठाउँछन् ।
जसले चुनौतिहरुसँग जुध्ने सामर्थ्य राख्दछ र हरेकका रोदनहरु बिना वर्णन नै सुन्न सक्दछ उसैलाई व्याख्या गर्ने शब्द हो नर्स । स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोगलाई रोकथाम र दुखाइ तथा पीडाहरुलाई कम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामी आफ्ना ज्ञान र सीप इमान्दारिताका साथ कसैको जीवन छुने वा कसैको जीवनमा केहि फरकपन ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रयोगमा ल्याउछौं ।
नर्सिङ एउटा यस्तो पेसा हो जसमा बुद्धि, ज्ञान, सीप, संयममता, दृढता अनि सेवाभावले प्रेरित हुनु पर्दछ । प्रत्येक नर्सहरु हरेकपल चुनौतीहरुले घेरिएका हुन्छन् र तिनलाई सामना गर्ने सामर्थ्य सदैव राखेका हुन्छन् । जतिपनि मानिसहरु नर्सिङ पेशामा लागेका छन्, सेवाभाव नै नर्सिङ पेसा प्रतिको आकर्षण हो । त्यसैले सेवा नै नर्सिङ पेसाको मुख्य सार हो भन्दा फरक पर्दैन । नर्सहरुमा हरेक अनुहार पढेर उसको मनको अवस्था बुझि त्यहि अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता रहन्छ । अथाह माया,त्याग, समर्पणले भरिएको एउटा विशाल हृदयशालिन व्यक्तित्व, मन्द मुस्कानसहित बचाउने उद्देश्य बोकेर संसार मस्त निद्रामा निदाइ रहँदा पनि खटिरहने, डटिरहने र जीवन र मृत्युको बिचमा युद्धरतहरुलाई जिताउनका लागि निरन्तर लडिरहनेहरु नर्स हुन् ।
आफ्नो भोक, प्यास, निन्द्रा र कैयौं वेदनाको पोकाहरुलाई कतै थाती राखेर डुब्नै लागेको एउटा युगलाई पुनर्जन्म दिनका लागि घण्टौं घण्टा उभिएर शतप्रतिशत सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नेहरु कसैलाई रोगबाट मुक्त बनाउन, कसैको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न र कसैका चोटमा मलम लगाउन प्रेम, दया र करुणा भाव आत्मसात गरी लागिरहन्छन् ।
आफ्ना सोह्र श्रृंगारलाई चटक्क बिर्सिएर रंगहिन सेता वस्त्रमा अशक्तहरुको जीवनमा रंग भर्नका लागि दुःखको हाासोमा चित्त बुझाउँदै आफ्ना खुशी, रहर, घर, परिवारसमेत बिर्सेर कसैको जीवनमा एउटा परिवर्तन ल्याउनका लागि तल्लिन छन् ।
बेलाबखत आउने महामारी अनि बस्ती नै ध्वस्त पार्ने मानवनिर्मित जघन्य घाउहरु जस्तै अप्ठ्याराहरुसँग पनि आफूलाई मृत्युको मुखैनेर राखेर जुध्नेहरुले कयौं तिता र पिरा वचनहरु सहँदै अरुका दुखका कथा सुन्दै रोग मुक्त बनाउन रातभर कैयौं बिरामीहरु बिचको दुरी पैतालाले हजारौं पल्ट नापि रहन्छन् । जटिल परिस्थितिमा पनि स्थिर रहि अरुलाई पनि संयमित हुन सिकाउँछन् । कहिले नजिकैबाट जीवनलाई देखेको हुन्छन् त कहिले मृत्युको साक्षी बनेका हुन्छन् । आफ्नै माता, पिता, बालबच्चाहरु सबै बिर्सेर मातृ स्नेहले भरिपूर्ण हातहरुले सेवादिने खास मनहरु केबल नर्सहरुमा भेटिन्छन् ।
नर्सिङ जस्तो स्वच्छ पेसा सायदै होला । कैयौंपल्ट दुर्व्यवहार र अपमान सहेर पनि आफ्नो कुनै प्रवाह नगरी फेरी सेवामा नै लागि रहने नर्सहरुको यो सेवा भावलाई केहिसँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन ।
चिकित्सा क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास भएसँगै आज विश्वभर नै नर्सिङको माग उच्च रहेको छ र विभिन्न अनुमानहरुका आधारमा पनि यो माग बढ्ने छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । स्वास्थ्य सेवा र प्रविधिमा भएको विकासले स्वास्थ्य सेवाप्रति मानिसहरुको बढ्दो अपेक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि पनि नर्सिङ पेशाको महत्पूर्ण भूमिका छ । आज नर्सहरु प्राविधिक रुपमा परिस्कृत क्रिटिकल केयर युनिटहरुमा जस्तै, सघन उपचार कक्ष, कार्डियककियर युनिट जस्ता विभागहरुमा विशेषज्ञका रुपमा सेवा प्रवाह गर्दछन् । यति मात्र नभई आपतकालीन विभाग, अप्रेशन, ओपीडी, डाइलाइसिस, अंकोलोजी, इन्फेक्सन कन्ट्रोल जस्ता विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञका रुपमा कार्य सम्पादन गरी रहेका छन् ।
नर्सिङ आफैंमा चूनौतीपूर्ण र संवेदनशील पेसा हो । आज चिकित्सा क्षेत्रमा विज्ञानले ठूलै फड्को मारे पनि हाम्रो देशमा नर्सिङ पेसागत रुपमा हेर्दा त्यति फड्को मारेको देखिँदैन । धेरै संख्यामा नर्सहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । हाम्रो देशमा न नर्सिङहरुको कामको उचित मूल्यांकन छ न त जागिरको स्थायित्व र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक । त्यसैले पनि आज देशभरका नर्स दिदिबहिनीहरु विदेश पलायन हुनु परेको छ । यसरी देशबाट उच्च प्रशिक्षित तथा जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढी रहेकोले कुनै दिन दक्ष जनशक्तिको अभाव नहोला भन्न सकिन्न । देशमा शैक्षिक योग्यता र अनुभव अनुसारको काम गर्ने व्यवस्था नहुनु, सेवाभित्रको शिक्षा, स्थायित्व नहुनु, कम पारिश्रमिक, उचित कार्य मूल्यांकनको अभाव, अत्यधिक कामको बोझ, कार्यस्थलमा हिंसाको खतरा जस्ता कारणहरुले आज देशबाट धेरै नर्सहरु पलायन भइरहेका छन् । यस प्रति राज्यको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ ।
प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १३:३७
कोभिडकालमा संक्रमण नियन्त्रण नर्स
संक्रामक एजेन्टको पहिचान र रोकथाममा इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सको मुख्य भूमिका रहन्छ । कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अन्य पूर्वाधारका साथसाथै त्यस्तो जनशक्ति बढाउनु पनि अत्यावश्यक छ ।
असार २७, २०७८ ज्वाला ढकाल
स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न किसिमका बिरामीहरू मात्र नभई तिनका आफन्त पनि आउँछन् । त्यस्ता बिरामीहरू संक्रमित र असंक्रमित गरी दुईखाले हुन्छन् । संक्रमित बिरामीले कुनै पनि रोग अर्को व्यक्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट सार्न सक्छन् । यस्ता रोगमा टीबी, झाडापखाला, भाइरल निमोनिया, टाइफाइड, कोभिड आदि पर्छन् । उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, क्यान्सरलगायत भने बिरामी वा व्यक्तिबाट अन्यमा सर्दैनन् ।
संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंग हो । स्वास्थ्य संस्थामा धेरै किसिमका कीटाणु हुने भएकाले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उचित तरिकाहरू अपनाइएन भने यो एक व्यक्ति वा बिरामीबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । संक्रमण नियन्त्रण स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जुन सम्पूर्ण बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हितका लागि अति आवश्यक छ । अनि यस विषयमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै स्वास्थ्य संस्थाको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । पहिले यसबारे खासै ध्यान नपुर्‍याइए पनि अहिले अति संक्रमित रोगहरू बढ्दै गएकाले यसको महत्त्व महसुस गरिएको छ । धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभागको व्यवस्था गरिएको पनि छ, जसले संक्रमितहरूबाट अरूलाई रोग नसरोस् भनेर ठोस कदम चाल्ने गर्छ ।
संक्रमण रोकथामको इतिहास हेर्दा, जबजब संक्रामक रोगहरू महामारीका रूपमा देखिन थाले तबतब सम्बन्धित निकायबाट सम्भावित संक्रमण र जोखिमबाट जोगिन संक्रमितहरूलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्ने अभ्यासहरू भएका छन् । पश्चिमा सभ्यतामा कुष्ठरोगीहरूलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने गरेको इतिहास भेटिन्छ । नेपालमा पनि राणाकालमा संक्रमितहरूलाई बस्तीभन्दा अलि बेग्लै ठाउँमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
इग्नाज सेमिमलुइस (जसलाई ‘संक्रमण नियन्त्रणको पिता’ पनि भनिन्छ) ले ‘प्युपेरल सेप्सिस’ संक्रमणका माध्यमको व्याख्या गर्दै स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूबाट पनि संक्रमण वा रोग सर्न सक्छ भन्ने पत्ता लगाए । उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि हातको सफाइको महत्त्वबारे पनि धेरै तथ्य बाहिर ल्याएका थिए । पहिलो इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स भनेर चिनिने फ्लोरेन्स नाइटिंगेलले बिरामीको अवस्थामा सुधार आउनुमा अस्पतालको वातावरणको पनि प्रभाव रहन्छ भन्ने विषयलाई उठाएकी थिइन् ।
आज विकसित मुलुकहरूमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भइरहेका छन् । त्यहाँ स्वास्थ्य बजेटको केही भाग संक्रमण नियन्त्रणका लागि छुट्याइन्छ । हाम्रो देशमा भने संक्रमण नियन्त्रणलाई गम्भीर रूपमा अझै लिइएको छैन । यद्यपि, संक्रमण रोकथामका लागि सामान्य तालिमहरू भने नभएका होइनन् । कोभिड महामारीमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको मुख्य भूमिका रहेको देखिएपछि यसबारे सर्वत्र चासो भने हुन थालेको छ । सामान्यतया सबै अस्पतालमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल कमिटीको स्थापना हुन थालेको छ । १०० शय्या क्षमताको प्रत्येक अस्पतालका लागि एक इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने अवधारणा नेपाल सरकारले ल्याएको छ । तर, यसले सबै ठाउँमा महत्त्व पाइसकेको भने छैन । कोभिड महामारीले इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सको महत्त्वबारे धेरै कुरा सिकाएको भने छ ।
कतिपय ठूला अस्पतालहरूमा इन्फेक्सन कन्ट्रोलका क्रियाकलापहरू सुरु भैसकेका छन् । सरकारले पनि तालिम दिएर केही जनशक्ति तयार पारेको छ । यी काम हुनुभन्दा अगाडि नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनले पनि केही नर्सिङ जनशक्ति इन्फेक्सन कन्ट्रोलका लागि तयार पारेको थियो, जसले कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि विशेष योगदान दिने अवसर पनि पायो ।
के हो इन्फेक्सन कन्ट्रोल ?
संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको अवधारणले स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील स्थानमा संक्रमणको प्रसारलाई रोक्न मद्दत गर्छ । बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संक्रमणका कारण हुने हानिबाट बचाउनका लागि डिजाइन गरिएको वैज्ञानिक दृष्टिकोण र अभ्यास नै संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण हो । यो त्यस्ता अभ्यास र प्रक्रियाहरूमा केन्द्रित छ, जुन प्रमाणमा आधारित हुन्छन् र तिनै अभ्यासको उचित प्रयोगले सूक्ष्म जीव वा कीटाणु प्रसारणको जोखिमलाई रोक्न वा कम गर्न मद्दत गर्छ । अस्पतालमा हुने संक्रमणको जोखिम कम गर्न यसको आवश्यकता पर्छ ।
के हो इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स ?
इन्फेक्सन कन्ट्रोलसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा विज्ञका रूपमा कार्य गर्न सक्ने शैक्षिक योग्यता र व्यावहारिक तालिमप्राप्त नर्सलाई इन्फेक्सन कन्ट्रोल (आईपी) नर्स भनिन्छ । अस्पताल इन्फेक्सन कन्ट्रोल टोलीमा पूर्णकालीन रूपमा काम गर्न र दैनिक क्रियाकलापहरूको नियमित सञ्चालनका लागि यस्ता नर्सहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आईपी नर्सलाई संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण नर्स पनि भनिन्छ । अस्पतालमा धेरैथरी जीवाणु हुन्छन्, त्यस्ता संक्रामक एजेन्टको पहिचान गरी त्यसलाई रोक्न आईपी नर्सको मुख्य भूमिका रहन्छ । उनीहरूको जिम्मेवारी संक्रामक रोगहरूबाट अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, सेवाग्रही र अन्य बिरामीलाई संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सचेत गराउँदै आवश्यक कदम चाल्नु हो । संक्रामक रोगबाट बच्न र बचाउन विभिन्न योजना बनाई कार्यान्वयन गराउनुका साथै स्वास्थ्यकर्मी, सेवाग्राही वा बिरामीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अभ्यासहरू प्रभावकारी ढंगले गराउनका लागि आवश्यक तालिम र शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै संक्रमणका जोखिमयुक्त अभ्यास र प्रक्रियाहरू पत्ता लगाउन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नुपर्छ ।
अस्पतालमा जम्मा हुने फोहोरमा धेरै संक्रमण गर्न सक्ने जीवहरू हुन्छन्, जसको उचित व्यवस्थापनमा आईपी नर्सले सघाउँछन् । शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिएर नियमित रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिने तथा नयाँ कुराको जानकारी पनि दिने गर्छन् ।स्वास्थ्य संस्था एक बहुआयामिक समूह हो । कुनै पनि व्यक्तिको एकल प्रयासले अस्पताल चल्दैन, सबै पक्षको उत्तिकै योगदानको आवश्यकता पर्छ । यसमा उच्च जोखिम पत्ता लगाउने र जोखिमयुक्त अभ्यासलाई हटाउनेमा आईपी नर्सको भूमिका रहन्छ । यस्तै योजना विकास, मापदण्ड तथा कार्ययोजना लागू गर्न सबै विभागीय प्रमुख मात्र नभई सम्पूर्ण कर्मचारीको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।
कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएसँगै यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको मुख्य भूमिका रह्यो । यस क्रममा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्‍यौं । कोभिड एक त नौलो महामारीका रूपमा भुसको आगोझैं फैलिरहेको थियो/छ, त्यसमा पनि यसको सर्ने माध्यम र उपचार पद्धतिका बारेमा राम्रोसँग तथ्यहरू बाहिर नआइसकेकाले स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्ण जनमानसमा डर उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो डर हटाएर कोभिड संक्रमितहरूको उपचार सहज बनाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । हाम्रो देशका धेरैजसो अस्पतालमा स्तरीय आइसोलेसन सेन्टरहरू थिएनन् । जस्तो बनावट छ, त्यस्तै स्थितिमा आइसोलेसन बनाएर उपचार गर्नुपर्ने वातावरण थियो । सामान्य बनावटको अस्पतालमा संक्रामक रोगका बिरामीहरूलाई उपचार गरी संक्रमण फैलनबाट रोक्नु चुनौतीका रूपमा रह्यो । अस्पतालको बनावटले मात्र होइन, सुरुका दिनमा ढिला गरी आउने पीसीआर रिपोर्टले पनि होल्डिङ क्षेत्रमा बिरामीहरूको चाप बढ्ने क्रमसँगै त्रास पनि बढाएको थियो । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, दोस्रो लहरमा भन्दा पहिलो लहरमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि धेरै अभाव थियो । अभावमै पनि व्यवस्थापन गर्नु हाम्रा लागि ठूलो चुनौती थियो ।
डर र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन मात्र नभएर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई शैक्षिक ज्ञान तथा व्यावहारिक तालिम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने र एक पटकको तालिमले मात्र नपुग्ने हुँदा निकै अप्ठेरो भएको थियो । मुख्य कुरा त इन्फेक्सन कन्ट्रोलमा कतिपय कुरा व्यक्तिगत सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरेर मात्रै ल्याउन सकिन्छ, जुन सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । किनभने मान्छे परिवर्तन हुन खोज्दैनन् । इन्फेक्सन कन्ट्रोलका लागि व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी हुन्छ । त्यसै गरी अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीहरूलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउने र संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी अपुग भएमा के गर्ने भन्नेजस्ता विषय चुनौतीका रूपमा थिए । त्यसलाई छिचोल्दै हामीले कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको सामना गर्‍यौं । अबको आवश्यकता कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्य पूर्वाधारका साथसाथै आईपी नर्सहरूको संख्या बढाउनु पनि हो ।
(ढकाल निजामती कर्मचारी अस्पतालमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सका रूपमा कार्यरत छिन् ।)
प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:०२